स्थायी राजधानीको प्रस्ताव नल्याउँदा सांसद रुष्ट
प्रदेश सभामा स्थायी राजधानी र नामकरणबारे छलफल नभएको भन्दै ३ नम्बर प्रदेशका सांसदले आक्रोश पोखेका छन् । प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्ले प्रदेशसभाबाट समिति बनाएर प्रदेश स्थायी राजधानीबारे प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभामा भने छलफलमा नल्याइएको भन्दै उनीहरूले रोष प्रकट गरेका हुन् ।
जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकामा थामी समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा रेकर्ड हेर्ने हो भने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुने बालबालिकाको अभिलेख नै पाउन सकिँदैन । अतिसीमान्तकृत जातिको रूपमा रहेको थामी समुदायका बालबालिका विद्यालयमा पढ्न जाने भए पनि विद्यालय छाडने संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
देशमा अर्बौं मूल्यको काठ आयात भइरहेका बेला डडेल्धुरामा सल्लाको काठ जंगलमा कुहिन थालेको छ । डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक वनमा काटिएको करोडौं मूल्य बराबरको सल्लाको काठ बिक्री नहुँदा अलपत्र रहेको काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको हो ।
२ जिल्ला घुमेर सदरमुकाम
षडानन्द नगरपालिकाका बासिन्दा सदरमुकाम आइपुग्न दुई जिल्ला घुमेर आउनु पर्ने बाध्यता छ ।
राजमार्गका सडकभरि चौपाया, दुर्घटनाको उच्च जोखिम
यो दृश्य हो पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मोरङको बेलबारी जंगलको । बेलबारी–लक्ष्मीमार्ग सडकको यो दृश्यले दुर्घटनाको जोखिम देखाउँछ ।
देशैभरि ढल अनुगमन गरिने
खानेपानी मन्त्रालयले देशैभरि ढलको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
भैरहवाको विश्वकर्मा मन्दिर उपेक्षित
नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानिएको भैरहवास्थित विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर उपेक्षित भएको छ । भैरहवा–लुम्बिनी रोडमा अवस्थित मन्दिरको इतिहास ३५ वर्षभन्दा पुरानो छ ।
गाउँपालिकाको क्रसर उद्योग बन्द
कालिञ्चोक गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा एक सातादेखि विकास निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिको वडा नं. ८ मलेपूमा २ वटा र वडा नं. ४ चप्लेटीमा एउटा क्रसर छन् ।
क्रसर उद्योगमा सिलबन्दी
संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–९ स्थित सभाखोला किनारमा सञ्चालित २ वटा क्रसर उद्योगमा शिलबन्दी गरिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरमा पूर्वाधार व्यवस्थापन सुरु
धनगढी उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको छ । योङ इनोभेसनको सहयोगमा पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको हो ।
प्रदेश सरकारको बेथिति
नवलपुर जिल्लासमेत हेर्ने गरी गोरखामा गण्डकी प्रदेश मातहत स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएको छ ।
वन्यजन्तु संरक्षण गर्न घर निर्माण
वन क्षेत्रमा घाइते अवस्थामा भेटिएका वन्यजन्तुलाई उद्धार गरी संरक्षण गर्न जिल्ला वन कार्यालयले संरक्षण घर निर्माण गरेको छ । घाइते वन्यजन्तुलाई उद्धार गरी संरक्षण गर्न घर अभावमा समस्या भएपछि वन कार्यालयले जिल्लामै पहिलो पटक संरक्षण घर निर्माण गरेको हो ।
स्याउको उत्पादन घट्यो
गत वर्षभन्दा यस वर्ष मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा स्याउको उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष १५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकोमा ४ मेट्रिक टन मात्र निर्यात भएको थियो । तर, यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशतले स्याउ उत्पादन घटेको किसानहरू बताउँछन् ।
ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने चेतावनी
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने उद्योगीले चेतावनी दिएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरूले यसअघि सरकारलाई बुझाएको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आपूर्तिमा अवरोध हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।